Mikasa ny hanakatona ny ONG mpiaro ny zon’olombelona ela niainana indrindra ao amin’ny firenena ny farany havanana ao Bolgaria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2019 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny русский, українська, Español, فارسی, Italiano, Ελληνικά, Shqip, English
Sary famantarana ny antoko politika VMRO-BND sy ny fikambanana sivily Bulgarian Helsinki Committee.
Nangataka ny lehiben'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny firenena hanafoana ny fisoratana anaran'ny Komity Helsinki Boligara na Bulgarian Helsinki Committee (BHC), FTMF mpiaro ny zon'olombelona sangany any an-toerana, ny antoko nasionalista farany havanana Boligara VMRO-BND, mpikambana ao amin'ny fiaraha-mitantan'ny fitondran'ny Praiminisitra Boyko Borissov.
Tamin'ny fanambarana an-gazety tamin'ny 30 Septambra, nanambara ny antoko fa “mitsabaka amin'ny raharahan'ny fitsarana” ny BHC tamin'ny fikarakarana ny seminera sy ny hetsika ara-panabeazana hafa niaraka tamin'ny mpampanoa lalàna sy ny mpitsara, ary teo ihany koa tamin'ny fisoloany tena ireo olona tany amin'ny Fitsarana Eoropeana momba ny Zon'olombelona sy ny fitsarana ao an-toerana.
Nilaza ihany koa ity fanambarana an-gazety ity fa “nandray anjara tamin'ny hetsika manohitra ny lalàmpanorenana, tsy araka ny foto-pisainana, ary mampiseho miharihary ny tsy fitiavana hetsika Boligara” ny BHC ary “toa hita fa momba ny fiarovana ny zon'olombelona ny asan'ny FTMF, ​​kanefa raha ny marina, mampidi-doza imbetsaka ny olom-pirenena Boligara sy ny anarana tsara nentin'i Bolgaria teo anoloan'ny rafi-panjakana iraisampirenena ihany koa. ”
Fiampangana iray hafa notanisain'ny VMRO-BND ny anjara asan'ny BHC amin'ny raharaha Jock Palfreeman, teratany Aostraliana izay voasazy higadra 20 taona noho ny nanatsatohany antsy ho faty ny teratany Boligara iray sy ny nandratrany olona iray hafa tany Sofia tamin'ny taona 2007. Niady ho an'i Palfreeman tany amin'ny fitsarana ny BHC, izay nilaza hatrany fa niaro tena izy. Nomena fahafahana narahana fepetra izy tamin'ny volana Septambra 2019 taorian'ny nanefany sazy 11 taona an-tranomaizina izay niteraka fihetsiketsehana an-dalambe sy tabataban'ny fampitam-baovao. Nilaza ny VMRO tao amin'ny fanambarana an-gazety fa “manome ny dingana fiarovana ho an'ny olona sasantsasany amin'ny raharaha notarihin'ireo mpitsara izay nofaniny ihany ny BHC … amin'ny alàlan'ny seminera izay tadiaviny hanaovana tsindry sy fitaomana amin'ny famahana ireo raharaha ahitana tombontsoam-pirenena mivantana.”
I Angel Dzhambazki, filoha lefitry ny VMRO-BND sady mpikambana ao amin'ny Parlemanta Eoropeana, sy i Alexander Sidi, solombavambahoaka Boligara ao amin'io antoko io ihany no nanao ny fangatahana hanafoana ity FTMF ity.
Mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana nanomboka tamin'ny taona 2007, nivadika ho any amin'ny farany havanana i Bolgaria tamin'ny taona 2017 raha niara-dia tamin'ny fiaraha-mitantan'ny antoko nasionalista madinika, anisan'izany ny VMRO-BND- ilay antsoina hoe “Fiombonan'ny Tia Tanindrazana” ny antoko afovoany-havanana GERB an'ny Praiminisitra Borisov. Manohana ireo soatoavina fandalana ny nentim-paharazana eo amin'ny fiaraha-monina indrindra izy ireo miaraka amin'ny endrika samihafa amin'ny fanoherana ny fidirana amin'ny Vondrona Eoropeana, ny fanoherana ny fanantontoloana, ny fankahalana ny Islamo, ary ny fitrohana izay rehetra Rosia, ary samy tsy tia resaka zon'olombelona ihany koa .
Naorina tamin'ny taona 1992, ny Komity Helsinki Boligara no fikambanana tranainy indrindra miaro ny zon'olombelona any Bolgaria sady mpikambana ao amin'ny Sendikà Fahalalahan'ny Sivily ao Eoropa pan-Eropeana. Manolotra fanampiana afa-karatsaka ara-pitsarana ho an'ireo niharan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona izy ireo ary manolotra ny fampahalalana ho an'ny besinimaro momba ny toetry ny zon'olombelona any Bolgaria ny tatitra isan-taona ataony. Matetika izy no manohana tsy tapaka ireo tetikasa momba ny fanabeazana ny zon'olombelona ary manolotra ny Loka ho an'ny Zon'Olombelona Isan-taona ihany koa ho an'ny tsirairay sy ny fikambanana izay mandray anjara amin'ny fampiroboroboana sy ny fampandrosoana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena.
Namaly tamin'ny fiampangana tao amin'ny lahatsoratra Facebook iray ny BHC izay nahatsiarovan'izy ireo ny fikasana teo aloha nataon'ny VMRO hanimba azy ireo.
Tsy vao izao akory no nanaovan'ity antoko mahery fihetsika ity ny karazana fanjakana tsy refesi-mandidy vaovao miharihary toy izany. Tamin'ny volana Oktobra 2017, nanoratra tany amin'ny Mpampanoa Lalàna Jeneraly izy ireo mba hanombohana fanenjehana ny Filohan'ny Komity Helsinki Boligara, Krasimir Kanev noho ny «fanaovana ankasomparana». Tamin'ny taona 2014, io antoko io ihany no nanoratra tany amin'ny Sampan-draharahan'ny Fidiram-bola-panjakana mba hanomboka famotorana.
Tamin'ny fanambarana nalefa tany amin'ny Meta.mk, masoivohom-baovao avy any Makedonia Avaratra ary mpiara-mizara votoaty ato amin'ny Global Voices dia nilaza ny filohan'ny BHC Krasimir Kanev:
Fomba Stalinista hiringiriny izany. Mampahonena ny mahita fa nandritra ny 30 taona taorian'ny fanovana demaokratika tany Bolgaria dia nisy ny fikasana hanerena ny fanarahana ny fomba Stalinista toy izany, mba hitsabahana amin'ireo andrim-panjakana ary hikasana hanaovana fanerena ny fiarahamonim-pirenena.
Boligara mihoatra ny 80 sy FTMF vahiny sy iraisampirenena any Bolgaria miisa 40, tamin'ny alàlan'ny fiaraha-mitantana antsoina hoe Sehatra Firaisankina Sivily no naneho ny fanohanany ny BHC ary niantso ny governemanta ao Bolgaria tsy hihataka amin'ny fandrahonana. Hoy ny fanambarany:
Mampiahiahy manokana ao amin'ny firenena izay ahitana tsy fandeferana tsy tapaka ny fivoaran'ny toe-draharaha ary tsy azo antoka intsony ny fiarovana ireo miasa amin'ny fiarovana ny vondrona vitsy an'isa sy marefo indrindra amin'ny mponina. Tsy misy fikambanana mpiaro ny zon'olombelona voarara any Eoropa ankehitriny. Na dia eo aza ny fepetra famoretana amin'ny amin'ireo firenena lohalaharana amin'ny demaokrasia ao Eoropa dia tsy misy firenena Eoropeana hatreto mandrara ny fikambanan'ny olom-pirenena. Tsy tokony hisantatra izany zava-mampididoza izany i Bolgaria .
Tamin'ny volana Desambra 2018, nisy olona tsy fantatra nanimbazimba ny tranobe misy ny Komity Helsinki ao Bolgaria niaraka tamin'ny graffiti manompa miantso azy ireo hoe “misehoseho, fasista, fako,fotaka.” Novalian'izy ireo tamin'ity sary ity , navoaka tao amin'ny pejy Facebook-ny niaraka tamin'ny teny hoe “Mora ny fankahalana, manome herim-po ny fitiavana .”
Nanao sonia fanambarana ihany koa ny filoha lefitry ny Amnesty International ho an'ny Eoropa, Massimo Moratti:
Fikasana tsy mbola nisy hatrizay hampanginana ireo feo tsy miankina sy manakiana ataon'ireo manampahefana any Bolgaria izany. Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana azy, manana andraikitra hitana ny fitsipiky ny lalàna i Bolgaria, ary manantena izahay fa handà mafy ny fangatahana ny fanafoanana ny Mpampanoa Lalàna Jeneraly. Ny Komity Helsinki Boligara no fikambanana mpiaro ny zon'olombelona hajaina indrindra ao Bolgaria. Zava-dehibe tokoa ny asan'izy ireo amin'ny fanomezana ny fahaiza-manao ho an'ny mpitsara sy ny mpampanoa lalàna ary ny dingana ara-pitsarana ho an'ny olona izay mila izany. Fanafihana mivantana ny fahalalahana maneho hevitra ny fikasana hanafoana ny anaran'izy ireo noho ny asany .
Tamin'ny taona 2016, naneho ny ahiahiny ny Birao Mpiaro ny Zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana rehefa avy nanafika an'i Kanev teo amin'ny araben'i Sofia ny lehilahy roa.
Nanoratra ho an'ny EuroNews ilay mpikaroka momba ny zon'olombelona Boligara Iveta Cherneva hoe “tsy te hahita ny firenena hanaraka ny ohatr'i Hongria aho hoy izy, izay nahitana FTMF mpiaro ny zon'olombelona sy ny oniversite noteren'ny manampahefana tsy maintsy nikatona sy nifindra toerana. Tsy izany no lalana tokony harahina. ”Nampiany ihany koa fa ny fanakatonana ny BHC dia “ho fipoahana ho an'ny fitarihana Boligara sy ny fandraketana ny zon'olombelona ao aminy. Tsy fitsapana ho an'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ihany izany fa ho an'ny Boligara rehetra sy ny Vondrona Eoropeana. ”
Pavlina Simonoska Arsikj dia mpandrindra ny serasera miaraka amin'ny Komitin'ny Helsinki ho an'ny Zon'olombelona ao amin'ny Repoblikan'i Makedonia, FTMF mpiaro ny zon'olombelona izay manana ny soatoavina mitovy amin'ny Komity Helsinki Boligara saingy tsy misy ifandraisany mivantana aminy .